Gaadhida Forklift Wheel, oo sidoo kale loogu magac daray gaadhi fargeeto ah, fargeeto hawl culus, gaadhi fargeeto ah oo culus, mishiinka raritaanka fargeetada, qaade culus.
Waxaa si weyn looga isticmaalaa meelaha laga qodo dhagaxa laga qodo iyo meelaha laga qodo, meelaha mashruuca laga sameeyo, deyrarka wax lagu soo raro iyo dekedaha si looga qaado xamuulka aadka u culus sida dhagaxyada, macdanta, weelasha iwm.
Wilson forklift loader wuxuu leeyahay noocyo kala duwan si uu ula kulmo xaalado shaqo oo badan;waxay ka qaadi kartaa 5 tan ilaa 50 tan.
Halbeegga waxqabadka / Xogta Farsamada
1 Guud ahaanlcabbirka mashiinka oo dhan Dhererka (fargeeto dhulka)
6 Awoodda haanta shidaalka
7 Awoodda haanta shidaalka Haydarooliga
8 Saldhigga giraangiraha
9 Taayirrada lagu tunto
11 Awooda fuulitaanka
12 Min.Nadiifinta dhulka
13 Halbeegyada joomatari Max.dhererka fargeeto qaadista
14 Cabbirka fargeetada caadiga ah (L*W*H)
Ku dhaji masaafada dhexe
16 Awoodda qaadida culeyska la qiimeeyay (dhammaan)
17 Max.1if awood
18 Matoorka Qaabka Matoorka
19 Awood la qiimeeyay/xawaaraha la qiimeeyay
Fiiro gaar ah: Halbeeggu wuxuu ku xiran yahay badeecada dhabta ah, maadaama tignoolajiyada mar walba wax laga beddelayo.
Faa'iidada wax soo saarka:
1.Wilson Forklift Wheel loader series codsan marka hore tayada caalamiga ah heerka supercharged dhexe-qaboojinta leh 375 hooras, waxa ay leedahay kayd xoog weyn iyo xoog weyn.
2. Sanduuqa dareeraha dareeraha ee korantada ee sare leh oo leh heer caalami ah, dhammaan qalabyada waxay qaataan qaabdhismeedka ilkaha helical si loo dammaanad qaado waxtarka gudbinta sare iyo qaylada hoose ee mashiinka wax lagu shubo.Gearrada si fiican u taagan, oo leh shaqada wareejinta KD waxay hubisaa hufnaanta hawleed sare.
Tignoolajiyada 3.Patented ee nidaamka bareegga labajibbaaran ee biyo nadiif ah oo buuxa iyo qaybaha bareegga ee asalka ah ee la soo dejiyo waxay xaqiijiyaan joojinta badbaadada.Haddaba, mishiinnada xamuulka qaada ee culculus way dhaqaaqi karaan oo istaagi karaan sida darawalku rabo, xataa alaabtu waxay saaran tahay fargeeto/jaakadaha.
4. Taayirrada waa 24.00R35 meridian bir ah.Awoodda qaadida ugu badan ee hal taayirka ah waa 55 tan, taas oo u ogolaanaysa baabuurta Wilson forklift in ay u qalmaan xaaladaha adag ee shaqada.
5. Xakamaynta tijaabada iyo qulqulka biyo-dhalayska buuxa waxay kordhisaa baaxadda hawlgalka isteerinka oo aad bay u dabacsan tahay.
6. Tignoolajiyadayada patented ee noo gaar ah ee garaadka iyo digitization waxay u sahlaysaa is-dhexgal is-dhexgal-saaxiibtinimo ah.Nidaamka maaraynta fog waxa uu hayaa diiwaanka xaalada isticmaalka rarayaasha forklift.Noocani wuxuu ogolaanayaa in la ogaado cilladda fog iyo ogaanshaha, iyo sidoo kale maareynta kumbuyuutarka.
7. Gacmaha lulaynta dib-u-habaynta, naqshadaynta awoodda culayska culus, xoogga sare iyo qaababka dhumucdiisuna sareeyso iyo falanqaynta curiyaha kooban ee qaybaha muhiimka ah...
8. Tiknoolajiyada sifaynta dhexe waxay xaqiijisaa saliidaynta wakhtiga ku habboon ee meelaha muhiimka ah, waxay yaraynaysaa khasaaraha korantada waxayna kordhisaa cimriga qaybaha iyo qalabka xamuulka.
9. Qalabka gudbinta wuxuu qaataa kala-guurka multisession si kor loogu qaado xoogga sare iyo wanaajinta nolosha adeegga ee xargaha gudbinta.Isteerinka dhexe ee ulaha articulated gudaha isteerinka goysyada dhuuban qaababka radial dhexe, jidaynayey xagal isku mid ah u dhexeeya kaararka iyo ulaha gudbinta marka jeestay, sidaas darteed wax soo saarka tamarta ugu fiican waa la gaaray.
Damaanad:Wilson waxa uu dammaanad qaadayaa hal sano ama 2000-saacadood oo dammaanad ah nooc kasta oo ah mashiinnada wax lagu raro fargeetada culus ee naga soo iibsada.Inta lagu jiro muddada dammaanadda, haddii ay dhacdo in wax cillad ah oo ku yimaadda xamuulka forklift ama qalabka dayactirka ee hawlgalka caadiga ah, qaybta cilladaysan waa la hagaajin doonaa ama lagu beddeli doonaa lacag la'aan.
Qaybaha kaydka ah:Wilson wuxuu u heellan yahay inuu macaamiisheena siino qaybo dheeri ah oo tayo sare leh.Waxaan xaqiijineynaa taam ahaanshiyaha saxda ah iyo shaqada ku habboon.Waxaa laguu dammaanad qaaday keenista degdega ah iyo adeegyada.Fadlan noo soo gudbi codsigaaga alaabta firaaqada ah, oo qor magacyada alaabta, nambarada moodeelka ama sharaxaadda qaybaha loo baahan yahay, waxaanu dammaanad qaadaynaa in codsiyadaada si degdeg ah oo habboon wax looga qaban doono.
Rakibaadda:Wilson waxa uu awoodaa in uu siiyo macaamiisheena muuqaalka guud ee rakibaadda ee mishiinada iyo qalabka wax lagu raro forklift.Taas ka dib, waxaanu samayn doonaa kormeerka mashiinka oo dhan waxaanan siin doonaa macaamiisheena warbixinnada xogta tijaabada ee rakibidda iyo hawlgalka.Waxaan sidoo kale u diri karnaa farsamoyaqaanno iyo injineero si ay u caawiyaan macmiilkayaga si uu u qabto shaqada rakibidda iyo dayactirka marka loo baahdo.
Tababarka:Wilson waxa uu bixiyaa tas-hiilaad sax ah waxa uuna siin karaa adeegyo tababar isticmaalayaasha kala duwan.Kulamada tababarka waxaa ka mid ah tababbarka alaabta, tababarka hawlgalka, aqoonta dayactirka, aqoonta farsamada, heerarka, shuruucda iyo tababbarka nidaaminta iyo wixii la mid ah.Waxaan nahay taageeraha macaamiisheena.
Hore: 8 Ton Telescopic wiish gurguurta xirfadeed oo wata shahaadada CE
Xiga: Taxanaha Raadiyaha Majarafad
Tele Loader, Wiish Gurguurta ee Telescopic, Raadiyaha Telescopic Wheel, Telescopic Boom Gurguurte Crane, Gurguurte Crane Telescopic Boom, Raadiyaha Taayirrada Telescopic,